आर्थिक | Sagarmatha TVSagarmatha TV आर्थिक | Sagarmatha TV
अमेरिकी डलर नयाँ उचाइमा: अझै केही दिन निरन्तर बढ्छ डलरको भाउ !
अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुने क्रम अझै थामिएको छैन। पछिल्ला केही दिनयता लगातार डलर बलियो बन्दै गइरहेको छ भने नेपाली रुपैयाँ कमजोर। यही क्रममा मंगलबार एक अमेरिकी डलरको सवनिमयदर ११४ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यसको अर्थ सर्वसाधारणले एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न ११४ रुपैयाँ २४ पैसा खर्चिनुपर्छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। मंगलबारका लागि […]
३ अर्ब ४५ करोडमा धरहरा बनाउन ठेक्का
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्पबाट भत्किएको धरहरा निर्माण गर्न तीन अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का सदर गरेको छ । सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का हाल्ने जिआईटिसी कालिका रमन जेभीलाई धरहरमा निर्माणको ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरणले आईतवार धरहरा निर्माण लागि परेका पाँच कम्पनीको प्रस्ताव खोलेको हो । धरहरा निर्माणमा ६ कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए । तीमध्ये आशिष कन्ट्रक्सन […]
प्रदेश ३ का सभामुखलाई मासिक तलब ५३ हजार तथा उपभसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५० हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । आईतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, समितिका सभापति र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका ४९ हजार, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकको ४७ हजार र प्रदेशसभा सदसइ सांसद को ४५ हाजर […]
५ रुपैयाँबाट जुट्यो ६३ लाख !
विराटनगर — बृद्धाश्रमका लागि एक जनाबाट ५ रुपैयाँ दान सकलन गर्ने अभियानबाट ८ बर्षमा ६३ लाख संकलन भएको छ । महानगर ८ मा रहेको विराटेश्वर बृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि एकजना व्यक्तिले चलाएको यो अभियानका लागि हालसम्म ४ लाख ९२ हाजर ९ सय ३ जनाले दान गरिसकेका छन् । अभियानकर्ता जगतप्रसाद अर्याललक अनुसार त्यति व्यक्तिबाट संकलित ५÷५ […]
अब एकल पुरुषलाई पनि भत्ता !
इलाम — श्रीमानको मृत्यु भएपछि एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले व्यवस्था गरेको वर्षौं बित्यो । उस्तै अवस्थाका पुरुषले भने केही पाउँदैनन् । तर देउमाई नगरपालिकाका करिब २ सय यस्ता ‘भाग्यमानी पुरुष’ छन्, जसले एकल महिलासरह मासिक भत्ता पाउँछन् । श्रीमतीको मृत्युपछि अर्को विवाह नगर्ने जुनसुकै उमेरको पुरुषले भत्ता पाउनेछ तर विवाह नगरी बसेकाका हकमा […]
८४ करोडको पर्खाइमा पूर्वलडाकु !
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट ३१ पटक सरे […]
यसरी अझै बढ्छ विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा : कुलमान घिसिङ
चुहावट नियन्त्रणबाटै ४ अर्ब बढी आम्दानी, चुहावट इतिहासकै कम काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष २०७४(७५ मा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खुद नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो रकम अझै बढ्न सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । गएको […]
डलरको मूल्य इतिहासकै महँगो, नयाँ रेकर्ड कायम
काठमाडौँ । अमेरिकी डलरको मूल्यले शुक्रबार इतिहासको सबैभन्दा महङ्गो बनेको छ । विहीबार एक अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य ११२ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेकोमा शुक्रबार पनि बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ ८९ पैसा पुगेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा यसको प्रभाव विश्वभर पर्दछ । यसले महङ्गीमा आम नेपाली जनता पिल्सने […]
बिमस्टेकमा आवद्ध सबैजसो मुलुकसँग नेपालले ब्यापारघाटा ब्यहोरेको छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपालले भारतसँगको ब्यापारमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । गत आवमा नेपालले ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सामान भारतबाट आयात गरेको छ भने ४६ अर्ब ६० करोड ४८ लाख […]
मङ्लबार, भदौ १२, २०७५
प्रभु बैंक पनि कनेक्न आइपीएसमा आवद्ध
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको कनेक्ट आइपीएसको इपेमेन्ट प्रणालीमा प्रभु बैंक पनि आवद्ध भएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट प्रति कारोबार १ लाख रुपैयाँसम्मको अनलाईन भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । यस प्रणाली मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गराई यसमा उपलब्ध हुने […]
हावा जॉच्ने मेसिनले काम गरेनन्, काठमाडौंको हावा दिनप्रतिदिन फोहोर बन्दै
राजपा महाधिवेशन कार्तिक २८ गते बाट सुरु हुने
शेयर बजार चार अङ्कले बढ्यो
जागीरभन्दा ब्युटी पार्लरको कमाई राम्रो
पाँचथर हत्या प्रकरण : एकजनाको मात्र संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धान
कुलमान भन्छन् : भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्नेछु
कम्पनी अध्यावधिक नगराउने ४८ म्यानपावरको कारोबार बन्द
मेस्सी सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सुचिमा, रोनाल्डो एक गोललेपछि
युवा फरवार्ड एमबाप्पे अर्को सिजन पनि पीएसजीमै रहने
६० मेगावाट क्षमताको थ्री ‘ए’को परीक्षण सफल
रहस्यमा रहेको मदन भण्डारीको मृत्युमाथि चलचित्र ’दासढुंगा २’
तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी हटेन